Vatican ပဏဖ်ါထီဥ၀ဲ ၂၀၂၅ ဎူဘလံဥအနံဥ အတႈဂ့ႈမိႈပွႈ | Radio Veritas Asia
Vatican ပဏဖ်ါထီဥ၀ဲ ၂၀၂၅ ဎူဘလံဥအနံဥ အတႈဂ့ႈမိႈပွႈ
Pope Francis opens the Holy Doors at St. Peter's Basilica to begin the Year of Mercy, Dec. 8, 2015. | L'Osservatore Romano.
လ႕တႈမၚလၚကပီၚ ၂၀၂၅ ဎူဘလံဥအနံဥအဂီႈ Vatican ပဏဖ်ါထီဥ၀ဲ တႈမၚလၚကပီၚတႈ အတႈဂ့ႈမိႈပွႈယ ဒ္အမ့ႈ၀ဲ နံဥလ႕အလီၚတိဏလီၚဆီ၀ဲ ဘဥဃးဒီးတႈဆိဥဂ့ၚ ဒီး တႈလဲၚဃုဏသကိးတႈလ႕တႈအိဥဖွိဥကရ႕အပူၚ နဥ့လီၚ’
စးထီဥလ႕ ပႈပါဎိၚဟဥပီလူခံဂၚတဂၚ တီခိဥရိဥမဲ၀ဲ အနံဥ ၂၀၀၀ ဎူဘလံဥအနံဥ၀ံၚအလီႈခံ ၂၀၂၅ ဎူဘလံဥအနံဥ ကမ့ႈ၀ဲ တႈအိဥဖွိဥကရ႕ အတႈမၚလၚကပီၚ၀ဲဎူဘလံဥ အဆိကတ႕ႈတဘ်ီ နဥ့လီၚ’ တႈသးကညီၚအဎူဘလံဥအနံဥ (The Jubilee of Mercy) လ႕အဘဥတႈအိးထီဥအီၚလ႕ ပႈပါဖရဥစ့း ဖဲ ၂၀၁၅ အနံဥ မ့ႈ၀ဲဎူဘလံဥလ႕ အဘဥတႈမၚအီၚလီၚလီၚဆီဆီတခါနဥ့လီၚ’
၂၀၂၅ ဎူဘလံဥအနံဥ ကအိဥ၀ဲဒီး တႈအိးထီဥပဲႀတီစီဆွံ လ႕ St. Peter Basilica တႈဘါသရိဏဖးဒိဥနဥ့လီၚ’ ပွၚလဲၚဘူဥဘါသကိးတႈလ႕ အလဲၚႏုႈလီၚဒီးခီဖ်ိဘဥ၀ဲ ပဲႀတီစီဆွံ လ႕အဘဥတႈအိးထီဥအီၚ ထဲဒဥလ႕ဎူဘလံဥအနံဥသ့ဥတဖဥအကတီႈယ ဒီးတႈအိးထီဥညီႏုႈအီၚ မ့ႈ၀ဲ ၂၅ နံဥတဘ်ီ မ့တမ့ႈ ဖဲပႈပါပဏလီၚ၀ဲ ဎူဘလံဥအနံဥ လ႕တႈလီၚတိဏလီၚဆီအပူၚအကတီႈယ ပွၚသ့ဥတဖဥအံၚ သ့ဒိးနႈ့ဘဥ၀ဲ တႈပ်ႈကြံဏအတႈကမဥအဘူးအလဲ (Plenary Indulgence) နဥ့လီၚ’
လ႕၀့ႈရိမ့ၚအပူၚ တႈဘါသရိဥဖးဒိဥ (Basilicas) လြံဥဖ်႕ဥသ့ဥတဖဥ အိဥ၀ဲဒီး ပဲႀတီစီဆွံသ့ဥတဖဥနဥ့လီၚ’ ဖဲ ၂၀၁၅ ဎူဘလံဥအနံဥ လ႕တႈပဏလီၚအီၚလီၚလီၚဆီဆီအကတီႈ ပႈပါဖရဥစ့း ပ်ဲ၀ဲဒ္သိး တႈဘါသရိဥဖးဒိဥ (Cathedrals) လ႕ဟီဥခိဥဒီဘ့ဥသ့ဥတဖဥ ကအိဥ၀ဲဒီးတႈအိးထီဥ ပဲႀတီစီဆွံသ့ဥတဖဥ စ့ႈကီးနဥ့လီၚ’
တႈမၚလၚကပီၚဎူဘလံဥအနံဥ အိဥ၀ဲဒီးတႈအခီဥထံးခီဥဘိလ႕ လံဏစီဆွံအပူၚယ ဒ္ဎူဘလံဥအနံဥသ့ဥတဖဥ ဘဥတႈပဏလီၚအီၚဖဲ စီၚမိၚရွ့အကတီႈ ဒီးဘဥတႈမၚလၚကပီၚအီၚ အနံဥ ၅၀ တဘ်ီ လ႕တႈပ်ဲပူၚဖ်ဲးကုႈသ့ဥတဖဥယ ဒီးတႈပ်ဲပူၚပွၚလ႕ အဒ့ဥအကမႈ ဒ္အမ့ႈတႈပဏဖ်ါထီဥ ဎြၚအတႈသးကညီၚနဥ့လီၚ’
လုႈလႈအံၚ ဘဥတႈပဏဂ႕ႈပဏက်႕ၚအီၚ ဖဲအနံဥ ၁၃၀၀ လ႕ Boniface (8) ဂၚတဂၚနဥ့လီၚ’ ပွၚလ႕အလဲၚဘူဥဘါတႈဆူ ၀့ႈရိမ့ၚသ့ဥတဖဥ သ့ဒိးနႈ့ဘဥ၀ဲ တႈပ်ဲပူၚအ၀ဲသ့ဥလ႕အတႈကမဥ ( Plenary Indulgence) နဥ့လီၚ’ ဖဲအနံဥ ၁၃၀၀ ဒီး ၂၀၀၀ အဘ႕ဥစ႕ၚ ဎူဘလံဥအနံဥ ၂၉ နံဥသ့ဥတဖဥ ဘဥတႈမၚလၚကပီၚအီၚလ႕ ၀့ႈရိမ့ၚနဥ့လီၚ’
တႈလဲၚႏုႈလီၚခီဖ်ိပဲႀတီစီဆွံအခီပညီမ့ႈ၀ဲ တႈခီဖ်ိထံဥဘဥက့ၚ ပႈကစႈဎြၚအတႈသးကညီၚလ႕ အကတ႕ႈတအိဥ၀ဲအပူၚ လ႕အတူႈလိဏပွၚကိးဂၚဒဲး ဒီးလဲၚထံဥလိဏအသးဒီးပွၚကိးဂၚဒဲး လ႕အနီႈကစႈဒဥ၀ဲယ မ့ႈပွၚလ႕အက်ဲးစ႕ၚဃုထံဥနႈ့က့ၚပွၚယ တူႈလိဏက့ၚပွၚယ အဂ့ႈ ပႈပါဖရဥစ့းစံး၀ဲ ဖဲအအိးထီဥ၀ဲ ဎူဘလံဥအပဲႀတီ လ႕ St Peter Basilica တႈဘါသရိဏဖးဒိဥ ဖဲ ၂၀၁၅ လါဒံဥစ့ဘ႕ဥ ၈ သီအမုႈနံၚနဥ့လီၚ’
Vatican unveil motto for 2025 Jubilee Year
Catholic News Agency Jan 13 2022
လ႕ကီႈကဥဘီဒံဎါအပူၚ ကဲးသလံး သီခါသ့ဥတဖဥဒီး ပွၚBuddha ဖိအသီခါသ့ဥတဖဥ သူဥလီၚသကိး၀ဲသ့ဥထူဥသ့ဥတဖဥ
စီၚပၚသ႕ဂၚတႈဘါသရိဏ လ႕၀့ႈတကူဥ ကဲထီဥ၀ဲတႈကြႈထြဲမၚစ႕ၚ ပွၚဘဥ Covid-19 သ့ဥတဖဥအတႈလီႈ တႈကစီဥ